(Xog) Ku tagri falka awoodda doorashada oo durba soo shaac baxday & Lafagareen oo xaqiijiyay kursi - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Xog) Ku tagri falka awoodda doorashada oo durba soo shaac baxday &...
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa shaaciyey in kursi ka mida Baarlamaanka Federaalka ee laga soo doorto K/Galbeed loo gaar yeelay, dibna loogu dooran doono xildhibaanka hadda ku fadhiya.
Xildhibaanka loo xaqiijiyey inuu ka mid yahay Baarlamaanka 11-aad ee Federaalka ayaa ah Xildhibaan Maxamed Mursal Boorow oo ku dhaawacmay Qarax culus oo loogu xiray gaarigiisa, kaasoo 15-kii September 2018 ka dhacay Koontaroolka Tiyaatarka Qaranka ee laga ilaaliyo Madaxtooyada, Waxaana xildhibaankan uu kasoo kabtay dhaawacaasi isagoo ku waayey gacan.
Madaxweynaha K/Galbeed oo xalay ka hadlyey kulan is cafin ah oo xildhibaanada Beesha Digil & Mirifle uu ku casuumay guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh ayaa ku adkeystay inaan loo dhowaan kadib kursiga xildhibaan Boorow mar haddii uu u dhaawacmay, isla markaana uu yahay nin da’ ah.
Xildhibaannada kale ayuu u balanqaaday inay mushaarkooda qaadan doonaan inta laga dhaarinayo Baarlamaanka cusub, kuwiis oo laaban waayana ay soo dhoweyn doonaan.
Previous article(Deg Deg) Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex dillaaco ciidanka Haramcad & Ciidanka Ahlu Sunna
Next articleSomalia, WFP Ink Deal for Emergency Locust Program